Indlela yokufumana i-backlink efanelekileyo ngeendlela ezilula?
Usenokuva kwiimviwo zethu zangaphambili malunga nokubaluleka kokwakhiwa kwekhonkco kwiziko lewebhu. I-backlink ibalulekile kwi-SEO ngenxa yenani leemeko ezahlukeneyo - ziphucula ukubonakala kwewebhusayithi kwiphepha lekhasi lokukhangela; baphakamisa igunya lewebhusayithi emehlweni e-Google; Bakha ukuqhutyelwa kwe-traffic rhoqo kwiwebhsayithi, nokwandisa idumela lesizinda. Ngoko, ukuba ufuna ukudala iphrofayli eqinileyo yokunxibelelana ukuze ukwandise isithuthi sakho senzululwazi, ufuna isicwangciso esilungileyo se-backlink esisebenza kuwe.
Masithi amanye amagama malunga nenxaxheba ye-backlink kwinkqubo yokulungisa. I-backlink yinto elula - xa ezinye idilesi zidibanisa kuwe, ukuba unxibelelwano lwangaphandle lubhekwa njenge-backlink. Indima ebalulekileyo kwisakhiwo soqhagamshelwano inomgangatho wemthombo wesiseko apho ikhonkco izayo. Iinjongo zophando zivavanya umgangatho we-backlink ngenani leempawu ezichanekileyo ezibandakanya igunya le-domain, inani kunye nobunjani bezonxibelelwano zangaphandle ezikhomba kule domain, ukubaluleka komxholo kumthombo webwebhu oluxhunyiwe, kwaye njalo. Ukuba yonke le migaqo ibonisa umphumo omuhle, umthombo wewebhu uza kufumana isikhundla esiphezulu.
I-backlink nganye inika inani elithile le-juice yekhonkco ngokusekelwe kwidumela layo, imbali kunye negunya kwi-niche ethile yemakethe.Ngako oko, i-backlink evela kwimithombo ye-PR ye-9 okanye ye-10 yemithombo ye-intanethi isebenza ngokugqithiseleyo kunobunzima be-backlink kwi-website ye-spammy engahambelanga naluphi na inani labasebenzisi.
Kukho konke okuthethiweyo, ukuba ufuna ukukhangela kwiphepha lekhasi lokukhangela kweGoogle, kufuneka ufumane i-backlink efanelekileyo neyekhwalithi kwi-PR ephezulu.
Kule nqaku, siza kuxubusha iindlela ezininzi ezikhohlakeleyo zokufumana i-backlinks esemgangathweni kalula. Yithemba ukuba lobu buchule buyakunceda ukuba ubeke indawo yakho kwindawo yakho yokukhangela ejoliswe kuyo. Ngoko, makhe sijonge ngakumbi kulezi zixhobo zokwakha izixhumanisi.
Izindlela ezilula zokufumana i-backlink kwiziko lakho
Ngokubhala ubungqina bobuchule, ufumana ithuba lokucebisa iphrofayli yakho yangemva kwe-backlink kunye ne-backlink efanelekileyo kwiindawo ezigunyazisiweyo. Nanini na xa uthenga iimveliso ezithile okanye iinkonzo ezithengisa i-credit yakho, unokushiya ubungqina kwiwebhusayithi yomthengisi. Iingqinisiso ziya kufumana isiqhagamshelo kwisayithi yakho ngaphakathi kwazo ukubonisa ukuba ubungqina bombutho bubunjwe. Kuya kukunceda ufumane i-backlink elula kwisayithi yakho ngaphandle kokuchitha nayiphi na i cent. Ukuba bayifake ikhonkco lekhonkco kubungqina bakho, ungabacela ngobubele ukuba bayitshintshe kwi-dof elandelayo.
Unokufumana ezininzi iinkcukacha ze-RSS kwiwebhu ukuvumela abasebenzisi ukuba bahlole iiblogi ezahlukeneyo, iifom, okanye imithombo yewebhu kwizihloko ezahlukahlukeneyo.Yithuba eligqibeleleyo kuyo nayiphi na iwebhusayithi yokufumana i-backlink ye-freefree elandelayo kwi-directories. Yonke into oyifunayo kukungenisa i-RSS feed yakho kule ngxelo. Unokwenza ngesandla, okanye ngokuzenzekelayo. Ukuba ungathanda ukwenza ngokuzenzekelayo, ungasebenzisa inkqubo ebizwa ngokuba yi-Fast RSS Submitter. Le nkqubo iya kukunceda uhambise i-domain yakho kuma-URL angaphezu kwe-100 kwi-RSS ngokuzenzekelayo, ugcine ixesha elininzi kunye nemizamo Source .